WAALLI: Shuruudii Aan Cidina Ogayn Ee Mesut Ozil Ku Xidhay Arsenal & Faa'idada Yaabka Leh Ee Uu Ilaa Maanta Ku Qabo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWAALLI: Shuruudii Aan Cidina Ogayn Ee Mesut Ozil Ku Xidhay Arsenal & Faa’idada Yaabka Leh Ee Uu Ilaa Maanta Ku Qabo
WAALLI: Shuruudii Aan Cidina Ogayn Ee Mesut Ozil Ku Xidhay Arsenal & Faa’idada Yaabka Leh Ee Uu Ilaa Maanta Ku Qabo
Kooxda ree London ee Arsenal oo si lamid ah kooxaha kale ee waaweyn ee dunida ay xaalad dhaqaale xumo ahi hayso ayaa lagu soo warramayaa inay wali bixiso mushaharka kubad sameeyaheedii hore ee Mesut Ozil.
Xiddiga ree Germany ayaa ahaa mid uu tababare Mikel Arteta gabi ahaanba ka saaray safka kooxdiisa horraantii xilli ciyaareedkan oo dhan kahor intii uusan qaab bilaash ah ugu wareegin dhinaca Fenerbahce bishii January.
Laakiin halkii laga filayay in Arsenal ay iska xorrayn doonto mushaharka aad u badan ee uu ciyaaryahankaasi ka qaadanayay, warar cusub ayaa sheegaya inay wali bixinayaan inta badan ee mushaharkiisa.
Wargeyska The Athletic ayaa sheegaya in Gunners ay wali bixinayaan in ka badan 90% mushaharkii uu Mesut Ozil kooxdooda ka qaadan jiray walow ay labada dhinac isku raaceen in qandaraaskiisii la kansalo shanta bilood ee ka hadhsanaa.
Heshiiskii Mesut uu ku joogay gegida Emirates Stadium ayaa ahaa mid dhacayay xagaaga sanadkan, 32 sano jirkaas ayaa lacag 350,000 oo pound ah qaadan jiray markii uu joogay London.
The Athletic ayaa sheegaya in Ozil uu Arsenal kala sii hadlay bxiinta mushaharkii uu kooxda ka qaadan jiray ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan maadaama oo uu mushahar dhimis aad u weyn u sameeyay kooxdiisa cusub ee Fenerbahce.
Kooxda Turkish-ka ah ayaa ilaa hadda bixisa wax ka yar 35,000 oo pound oo mushaharkiisa ah iyadoo ay warar hore sheegayeen inuu kooxdaas kula heshiiyay inuu toddobaadkii 68,000 oo pound.
Arsenal ayaa sanadkii 2018 siyaasadeeda mushahar bixinta u jabisay Mesut iyaga oo ka dhigay xiddiga ugu mushaharka badan taariikhda kooxdooda.